Archive du 30-juin-2021
Krizy mananontanona Mety hiakatra ihany koa ny vidin-tsolika…
Mamofompofona fiakaran’ny vidin-tsolika ny eto Madagasikara izay mety hanampy trotraka ny krizy ara-toekarena sy sosialy efa misy ny eto amin’izao fotoana izao.
Fahefana tsy ampy fahendrena
Mampanaonao foana io fahefana io rehefa tsy ampiasaina amin’ny fomba ara-drariny sy am-pahamendrehana. Misy fotoana mba tokony hileferana sy hahatsapana tena,
Famitaham-bady Nahavita nangalatra zaza menavava ilay vehivavy
Vehivavy namitaka ny vadiny ary nilaza fa bevohoka no anisan’ny tompon’antoka tamin’ny fahaverezana zaza menavava vao teraka tao amin’ny hopitalin’Andapa
Sao diso hevitra Ny kere no fahavalo fa tsy ny mpanao gazety
Lasa any amin’ny adihevitra mivaona tanteraka no niafaran’ilay raharaha famoaham-baovao nataon’ny mpanao gazety Gaëlle Borgia momba ny kere sy ny fijalian’ny mponina any Atsimon’ny Nosy.
Lalana Rocade Iarivo Tsy azo hivarotana, 50 km/ora ny hafainganam-pandeha
Misy mpivarotra mitetika ny hivarotra sahady eny amin’ny lalam-baovao Rocade Iarivo taorian’ny nanokanana ity foto-drafitrasa ity tamim-pomba ofisialy.
Maitre Olala sy Arlette Ramaroson “Fanaovana tsinontsinona ny zon’ny mpanohitra izao”
Ny lalampanorenana, raha ny voalaza ao amin’ny andininy faha 14, no miantoka ny zo hijoro ho mpanohitra amin’ny fomba demokratika, hoy ny mpahay lalana iraisampirenena teo aloha, Arlette Ramaroson,
AVC, Prostaty, Diabeta Manampy sy manome tanana ny TASA
Mirongatra ireo karazan’aretina maro samihafa amin’izao vanim-potoana mampahazo vahana ny hatsiaka eto amintsika izao.
Governemanta sy depiote Nahemotra ny “face à face”
Tsy raikitra tamin’ny ora farany ny fifanatrehan’ny avy eo anivon’ny governemanta sy ny depiote izay tokony notontosaina anio teny amin’ny CCI Ivato.
Fanadihadiana nampiady hevitra Nisafidy ny hangiana hatreto ny Minisitry ny serasera
Herinandro teo ho eo izay no niteraka adihevitra tsy nifankahitana teto Madagasikara ny famoahan’ilay mpanao gazetin’ny France 24 sy TV5 Monde Rtoa Gaëlle Borgia